Fahatapahan’ny rano teny Ambodin’Isotra: tafakatra 3000 Ar ny rano iray daba, tezitra ny mponina | NewsMada
Fahatapahan’ny rano teny Ambodin’Isotra: tafakatra 3000 Ar ny rano iray daba, tezitra ny mponina
Nanararaotra ny fahavoazana ireo mpatsaka teny 67 ha sy Ambodin’Isotry iny omaly. Tafakatra 3.000 Ar ny rano iray daba. Voatery mandeha alavitra ireo mpaka rano hamatsiana ny mponina teny an-toerana.
Niteraka fimenomenomana teo amin’ireo mponina eny Ambodin’Isotry , 67ha, Anatihazo sy ny manodidina ny fahatapahan’ny rano naharitra omaly teny an-toerana. Nanararaotra izany ireo mpikarama an’ady natsaka. Tafakatra hatrany amin’ny 3.000 Ar ny rano iray daba mavo.
Tapaka hatramin’ny paompim-pokonoona ka voatery mandeha alavitra ireo mpaka rano vao mahita rano amidy amin’ny oona eny amin’ny manodidina.
Araka ny fantatra, vokatry ny fanamboarana ny fantson-dranon’ny Jirama no nahatapaka ny rano teny an-toerana.
Marihina fa anisan’ny antony iray manimba ny lalana eto Antananarivo Renivohitra ny fahasimban’ireo “buse”, na fantson-drano any ambanin’ny arabe. Toy izany indrindra no nitranga teny Ankadifotsy ampitan’ny sekoly Katolika Fo masin’i Jesoa Antanimena.
Simba noho ny fahanterany sy fahatapahan’ireo “tuyau”-ny Jirama ny “buse” iray tao ambanin’ny arabe. Anisan’ny nahatonga ny fahasimban’iny lalana iny izany.
Omaly, tonga avy hatrany teny an-toerana ireo sampan-draharaha misahana ny fotodrafitrasa avy ao amin’ny CUA mba hamerina amin’ny laoniny indray ireo simba teny an-toerana toy ny “buse” sy ny arabe. Tonga teny ihany koa ireo ekipa avy ao amin’ny Jirama nanolo ireo “tuyau” tapaka. Haharitra andro vitsivitsy ny famerenana amin’ny laoniny ity lalana ity.
Manentana ny mponina, araka izany, ny kaominina Antananarivo Renivohitra mba samy hikajy ny fotodrafitrasa.
Betsaka ihany koa ny lalana simba noho ny hafitsok’ireo mpampiditra rano ka tsy maintsy manapaka arabe. Matetika, tsy misy mamerina amin’ny laoniny ireny arabe vakina hampidirana fantson-drano ireny ka lasa lavaka be no havelany eo.
Ankoatra izany, betsaka ny fantson-dranon’ny Jirama efa tranainy. Eny amin’ny faritra Itaosy iny, efa mifangaro amin’ny rano maloto ny ranon’ny Jirama. Maimbo ny rano tonga any an-tokantrano ary tsy azo ampiasaina mihitsy kanefa dia takina vola isam-bolana ihany ireo tokantrano ireo.
Tsy misy fanamboarana kanefa efa ho efa-taona no nisian’izany tranga izany ary efa betsaka ny fitarainana nataon’ny mponina, saingy tsy misy manoina hatramin’izao.
Tato ho ato koa, betsaka ny toerana tapaka famatsiana rano, tsy misy filazana mialoha. Tsy misy koa ny fanazavana entin’ny Jirama mahakasika izany. Ankoatra izany, Rano maloto no tonga any an-tokantranon’ny tsirairay. Avela andeha elaela mihitsy ny rano vao manomboka madio sy azo ampiasaina.